နေမကောင်းခြင်းမှာ.. အလွမ်းတွေ နဲနဲဖောက်ထားသလိုပါပဲ..
သတိရခြင်းတွေ ခပ်ကျကျ ဖြစ်နေလိုက်ပုံများ..
ချစ်သူအတွက် ကျွန်တော်ဆိုတာ ဘာလဲ..
သူ မမြင်အောင် ကြိတ်ပြီး သက်ပြင်းချရတာ မောလိုက်တာ..
ကျွန်တော့်ကို ဆူပါ.. ကျွန်တော့်ကို ပြောပါ..
ဇော်ဆိုတာ ရင်ဘတ်ထဲမှာသာ အားငယ်နေတတ်ခဲ့တဲ့ကောင်ပါ..
ဂျစ်ကန်ကန်ဆန်တဲ့ ဇော်.. ဂရုမစိုက်တတ်တဲ့ဇော်..
သူ့မှာလဲ အချစ်ရှိတယ်.. အားငယ်တတ်တယ်..
စိုးရိမ်တယ်.. နောက် နူးညံ့ချင်တယ်..
တာ့တာဆိုတဲ့စကားလုံး နှစ်လုံးကို ကျွန်တော်မုန်းချင်လာခဲ့ပြီ
နောက်မှပေါ့ ဆိုတာတွေကို နဲနဲလောက်လွှင့်ပစ်ခွင့်ရနိုင်မလား
အဲ့ဒီ ဟန်ဆောင်လောက၀တ်တွေကြားက ခနလောက် ရုန်းထွက်ခွင့်ကို
မိုးဘယ်မှာ ရွာနေလဲ ကျွန်တော်မသိဘူး...။
Posted by ဇော် at 6:34 PM5comments:
ကျနော့် အကုသိုလ် ။
Posted by ဇော် at 6:16 PM3comments:
အ၀ါရောင် သင်္ကေတ တစ်ခု
Posted by ဇော် at 4:40 AM2comments:
ချမ်းအေးတဲ့ ပြင်ဦးလွင် December က
Posted by ဇော် at 3:34 AM3comments:
သစ္စာ၌ ဆန္ဒကို တည်သောအခါ .....
ငါ ... လုံးပါး ပါးခဲ့တော့မယ်။
ငါ့ ခြေလှမ်းတွေ ယိုင်နဲ့ခဲ့ရပြီ။
ငါ ... နစ်မွန်းနေခဲ့ပြီ။
အလင်းကို ပြသောသူ ဖြစ်ပါလော့
ငါ့အား .. တောင်ဝှေးဖြစ်ခွင့် ရှိပါရစေ။
ငါ့အား တိတ်ဆိတ်ခြင်းလဲ ရှိပါရစေ။
ငါ့အား ငြိမ်သက်ခြင်းလဲ ရှိပါရစေ။
ငါ့ အတ္တခန္ဒာကို ထည့်သိုရင်း
ငါ့ကိုယ်ငါ သရဏဂုံ တင်ခဲ့ပါရစေ။
ငြိမ်းချမ်းသောသူသည် ငြိမ်းချမ်းရာသို့ သွားရာ၏။
ငါ၏ ရင်သည် မီးထက် အဆတစ်ရာ ပူသော
ငါ့အား တွဲလက်ကို ကမ်းပါလော့...
ငါ့အား ခေါ်ဆောင်ရာသို့ တည်ပါစေ။
Posted by ဇော် at 10:28 PM5comments:
ငါ့မျက်ရည်နဲ့ ဟန်ဆောင် မိတ်ဖွဲ့ကြဦးမယ်
မြေပြင်ကိုက မျိုးဖြစ်ဖို့ ညံ့ခဲ့တယ်
အဲ့ဒီ အပြာရောင်လေးနဲ့ ငါဆုံတိုင်း
ဒီရင်ဘတ်ကို ငါ မုန်းတယ်
ဒီနားရွက်တွေ ငါ မုန်းတယ်
Posted by ဇော် at 9:03 AM6comments:
လေလှိုင်းထဲ စီးမျောလာတဲ့ အဲ့ဒီ ဂီတတွေထဲ
ညစ်ညူးမှုတွေ အချိုးကျကျ ပါဝင်နေခဲ့ပါသတဲ့
မကြည်လင်မှုတွေနဲ့ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ ဂီတတွေရဲ့
ငါ အသက်ရှူဖို့တောင် မေ့လျော့ခဲ့မိတယ်
ငါ ကိုယ်တိုင်တောင် နှင်းဖြစ်လောက်တယ်
စိုထိုင်း အေးစက်နေတဲ့ ဒီအခန်းကျဉ်းလေးထဲ
အကြောင်းအရာတွေ ကြီးကျယ်စရာမှ မလိုခဲ့ဘဲလေ...
အေးစက်စက် ဂီတသံတွေ နာကြားရင်း
ငါ့ စိတ်ခန္ဒာ.. အဲ့ဒီခြေရင်းမှာ ပြိုလဲခဲ့တယ်..
စကားလုံး မရှိတဲ့ ခံစားချက်ကို .. အဓိပါယ်ဖွင့်ဖို့ ငါ ကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲ
ငါ မငိုပါဘူး ချစ်သူ
မျက်ရည်တွေက နာကျင်ခြင်းတွေကို တိုက်စားသွားမှာစိုးလို့
အဲ့ဒီ မြှားဒဏ်ရာရဲ့ သွေးအစက်စက်ကျမှုကို သိမ်းဆည်းရင်း ငါ တိတ်တဆိတ် ကြွေလွင့်ခဲ့တယ်..
နဖူးက အမာရွတ်ကိုမြင်တိုင်း မဟော်ကိုသတိရတတ်တဲ့ ကေ၀ဋ်ပုဏားလို
ငါ့ သွေးအစက်စက်ကို နင်ပြဆိုတယ်
ငါ သိပ်ချစ်တဲ့ ဟော့ဒီ ငါ့ရဲ့ လက်အစုံက ငါမြတ်နိုးတဲ့ ချစ်သူကို နာကျင်စေခဲ့တယ်တဲ့လား
ငါ တန်ဖိုးထားခဲ့တဲ့ ငါ့ စိတ်ကူး အသိဥာဏ်အချို့က ငါ ချစ်တဲ့ ချစ်သူကို စိတ်ညစ်စေခဲ့တယ်တဲ့လား
အလန့်တကြား ငါ မော့ကြည့်မိတော့..
အိုး ကောင်းကင်ရယ်.. မှိုင်းမှုန်ရီဝေလွန်းချည်ရဲ့
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ စကားသံတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို အလူးအလဲ ငါ ခံခဲ့ရတဲ့နောက်
လေတွေတောင် အတွယ်အတာ မဲ့နေကြသလိုပါပဲ
လောကကြီးရယ် .. ငါတစ်ယောက်တည်း နေခွင့်ပေးပါ
ဘုရားအဆူဆူရှေ့ ငါ့ချစ်ခြင်းကို ပြဌာန်းချင်လို့
ချစ်မိတာကို အပြစ်တစ်ခုလို အတင်းဆိုကြပါစေ..
ငါ့ ရင်ဘတ်က အသည်းနှလုံးတစ်ခြမ်း နင်တစ်ခြမ်းဖြစ်ခဲ့တယ်
ချစ်သူရင်ကို မြင်အောင်မကြည့်နိုင်ပါဘဲ ဝေါဟာရတွေ ဖွဲနွဲ့ခဲ့မိလို့
ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကား ချစ်သူနားလည်အောင် ပြောမပြတတ်ခဲ့တဲ့ကောင်
နောင် ဆယ်ကမ္ဘာတိုင်အောင် လွမ်းရစေသတည်းတဲ့..
ဒီလိုနဲ့ပဲ .. ကျနော်ပျောက်ဆုံးခဲ့တော့တယ်
Posted by ဇော် at 7:59 PM6comments:
ဒါပေမယ့် တစ်သက်စာလုံး ညို့မှိုင်းလို့
လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ အစွမ်းကုန် ပွင့်အာဖို့
ငါ့တစ်ကိုယ်လုံး ဆူးတွေ စူးလို့
ကံဇာတာမှာ ရာဟုတွေများ အုပ်စိုးနေခဲ့လားလို့
ငါ့ ရင်ကမ်းစပ်မှာ နင့်အလင်းတွေကြောင့်
ကြယ် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ငို ကုန်ပါ့မယ်
ငါကိုက နင့်လောင်းရိပ်မှာ မိခဲ့တယ်
မလှန်ဘဲ ထားခဲ့မိတဲ့ အဲ့ဒီ စာမျက်နှာထက်
နှလုံးသွေးကိုဖောက် အဲ့ဒီ အဆိပ်ကို သောက်ခဲ့မိရင်းက
Posted by ဇော် at 7:01 PM2comments:
ဘယ်အချိန်လဲလို့လဲ သူ မသတ်မှတ်သွားဘူး..
တိတ်ဆိတ်တဲ့ ကျန်ရစ်မှုအောက်.. နာရီပတ်တွေ လည်ခဲ့တယ်
မိုးရွာပြီးစ သက်တံ့ရောင်ပျိုကိုမှ လွမ်းဆွတ်မိတဲ့ငါ
ဖိတ်ခေါ်လို့မှ ရောက်မလာတဲ့ ဧည့်သည်
စုပ်လဲဆူး စားလဲရူးတဲ့ လူ့အန္ဓတစ်ယောက်ရဲ့ ရာဇ၀င်မှာ
နှုတ်ဆိတ်မဲ့ အလင်္ကာတွေ မျိုးကြဲ
ခွင့်မတောင်းပါဘဲ ဆက်ထားမိတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို
ငါက သစ်တစ်ပင်ပါ ..
ပျံသန်းရောက်ရှိလာတဲ့ နွေဦးငှက်လေးကို ရင်ခွင်မှာ ပွေ့ဖက်မထားနိုင်ခဲ့ပေမယ့်
သူထားခဲ့လေသမျှ ခြေရာတွေကို သိမ်းဆည်းသိုဝှက်ရင်း
Posted by ဇော် at 5:43 PM3comments:
နှစ်ဆယ့်လေးနာရီတွေ ထောင်ချီနေခဲ့ပြီ ...။
အချိန်တိုင်းမှာ ငါ ရူးခဲ့မိတယ်
အိပ်မက်တွေထဲ စိတ်ကူးတွေ ထည့်ဖျော်ရင်း
မသိနိုးနား ငါထုံအခဲ့တယ် ...။
ငါ ရင်နင့်ခဲ့ရပါလိမ့် ...။
မှော်ရုံတောတွေ မဖြစ်ထွန်းလောက်ဘူး ထင်ပါရဲ့ ...။
ငါ ကဗျာတွေ စပ်လိုက်တယ်
ငါ့ မျက်နှာကို မော့မော့ကြည့်နေတုန်း ...။
Posted by ဇော် at 8:15 PM5comments:
ခပ်ပျပျ အလင်းရောင်တွေ မှုန်ဝါးဝါးလွှမ်းခြုံ
ဆေးပန်းချီတွေ ချယ်မှုန်းဖို့ သူကြိုးစားတယ်
စုတ်ချက်တွေလဲ သူ ဆွဲပါရဲ့
ညက ကျနော့်စိတ်ကူးတွေကို ခိုးယူစားသုံး
တမြေ့မြေ့နဲ့ ကျနော့်ကို ဖုံးအုပ်
သူ လွှမ်းခြုံခဲ့တဲ့ အနက်ရောင် ပိတ်သားအောက်မှာ
မှုန်ရီဝိုးတ၀ါးထဲ တစ်စစ လဲပြို
အရုဏ်မတက်ခင် အာရုံတွေထဲ ဖျားနာခဲ့တယ်
ရောင်နီမလာခင် အရောင်တွေထဲ နီထွေးခဲ့တယ်
အလင်းတွေ မခင်းကျင်းခင် အလင်းတွေနဲ့ ထွန်းလင်းခဲ့တယ်
မာယာတွေထဲ မာန်တွေနဲ့လဲ ရှင်သန်တယ်
ည ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်
၃နဲ့၎ လို ကျောချင်းကပ်ချစ်ခြင်းမျိုးနဲ့
ညက နေ့ကို လက်ပြနှုတ်ဆက်
ည တိုးဝင် ထွက်ခွာသွားခဲ့တော့တာ
အခုဆို နာရီတစ်ပတ်တောင် ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့ဗျာ
Posted by ဇော် at 11:05 PM4comments:
တမ်းတခြင်းနဲ့ လေညင်းကို တီးတိုးဆိုတယ်..။
( လင်းစက်ရာရဲ့ ၂၃နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကို ကျနော် သူ့ကဗျာလေးနဲ့ နှုတ်ဆက်ပါတယ်
လင်းစက်ရာ (သို့မဟုတ်) စိုးထွန်းနောင်... မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ... သူချစ်တဲ့ ကဗျာတွေနဲ့အတူ အမြဲ ရှင်သန်နိုင်ပါစေ..... )
Posted by ဇော် at 7:29 PM 1 comment:
အစကတည်းက သေချာခဲ့သော တိတ်တဆိတ် ကျန်ရစ်ခြင်း
ကောင်းကင်ရဲ့ ထောင့်ချိုးကနေ ချောင်းကြည့်နေလေရဲ့
ငါ တိုးတိတ်စွာ ဟစ်ကြွေး
နင့်ချိတ်ဆွဲနေတဲ့ အဲ့ဒီ ကောင်းကင်ထောင့်ချိုးက ဆည်းဆာလေးတစ်ခု
မသွားပါနဲ့လို့ ငါ မတားခဲ့လိုက်နိုင်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် နင်ချန်သွားတဲ့ နောက်ဆုံးဆည်းဆာရောင်မှာ
ခိုးခိုးပြီး လင်းနေခဲ့ရပြီပေါ့ဟာ .....
Posted by ဇော် at 6:52 PM3comments:
တိတိကျကျ လွမ်းခဲ့မိပါသော .....
ချစ်သူကို သတိရလွန်းလို့ .. ကောင်းကင်ကြီးရဲ့
မျက်နှာပြင်မှာ သူ့ပုံရိပ်များ ထင်နေမလား
ချစ်သူကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ကျနော် ခင်ဗျားတို့ဆီကတဆင့်
သူ့ဆီ စကားတွေ ပါးနေမိတဲ့အကြောင်း...
ချစ်သူကို နားလည်အောင် ကျနော် ဘယ်လိုပြောရပါ့မလဲ
ချစ်သူကို ကျနော်လွမ်းနေတယ်.. သတိရတယ်..
ခင်ဗျားတို့ အတောင်ပံတွေကို အသုံးပြု
ရိုက်ခတ်မှုတိုင်းနဲ့ ချစ်သူဆီ အမှာပါးပါရစေ
ရှိခွင့်တစ်ကြိမ် ကျနော် မျှော်လင့်ပါရစေ
ချစ်သူနမ်းတဲ့ ပန်းကလေး ကျနော်ဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်း
နံနက်ခင်းတိုင်းမှာ ကျနော့်ကိုယ်စား ချစ်သူကို နှုတ်ဆက်ပေးကြပါ
ကျနော် ဖူးတွေ့ခွင့်မရှိတဲ့ ချစ်သူ့မျက်နှာ
နံနက်ခင်းရဲ့ ပွင့်ချပ်လွှာတိုင်းမှာ ကျနော်အတူရှိချင်နေမိတယ်ဆိုတာ
ချစ်ခြင်းအတွက် ကျနော့်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ပါးပါးလေးတစ်ချို့
ချစ်သူကို ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးကို
ကျနော် ဖြောင့်ချက်တစ်ခုကို ၀န်ခံပါရစေလားဗျာ
ချစ်သူ ရင်ခွင်ထက်ဆီက အဲ့ဒီ အိတ်ကပ်ကလေး ကျနော်ဖြစ်ချင်ပါတယ်
ချစ်သူ မျက်နှာတော်ပါး.. မော်ဖူးခွင့်ရဖို့...........
Posted by ဇော် at 2:36 AM 10 comments:
ငါ့ကိုယ်ငါ ခ၀ါချလိုက်တဲ့ အဲ့ဒီ အရောင်မဲ့ ကဗျာညတွေ .....
ခြောက်သွေ့တိတ်ဆိတ်ပြီး ငြိမ်သက်လွန်းတဲ့ အမှတ်တမဲ့ အဲ့ဒီ တနင်္လာနေ့ ညနေတွင် ချစ်သူကို ကျွန်တော် စတင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ပြန်ပြောဖို့ခက်သော အကြောင်းအရာအချို့ ရှိသည်ဆိုပါစို့...
ချစ်သူသည် ကျွန်တော်၏ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။
ခန့်မှန်းရခက်သော နက္ခတ်ရာသီလဲ ဖြစ်သည်။
ဆူညံသံတို့ ကင်းမဲ့သော အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံလဲ ဖြစ်သည်။
ညနေခင်း၏ နေ၀င်ချိန်တွင် အမှောင်ထုတစ်ခုကို ကြိုဆိုရင်း ချစ်သူကို မေ့လျော့စွာ တသသ ငေးကြည့်ခဲ့ဖူးသည့် အဲ့ဒီ အချိန်တစ်ချို့တွင်.. မက်မောမှုများ စီးမြောနေခဲ့ဖူးပါသလား....
ဖယောင်း၏ ပျော့ပြောင်းခြင်းလို.. ရေပြင်၏ နက်ရှိုင်းခြင်းလို ... ပွင့်ချပ်လွှာတို့ နူးညံ့သလို
ကြည်လင်မှုတစ်ခုအောက် နစ်မြုပ်ပျော်ဝင်ရင်း .. သူ့ကို ကျနော်မြတ်နိုးခဲ့ဖူးသည်။
ချစ်ခြင်း၏ အဇ္ဖျတ္တတစ်ခုကို ကျွန်တော် ပါးပါးလေး တွေးကြည့်ခဲ့မိတော့ ကျွန်တော့်ရင်တို့ သိမ့်ခနဲ ....
မျှော်လင့်စွာ ... ယစ်မူးစွာ... စွဲလန်းစွာ... သူ့ကွန်ယက်၌ ကျွန်တော်မလှုပ်မယှက် ရုန်းထွက်ရ ခက်ခဲ့ဖူးသည်။
ချစ်သူသည် ညနေ နေ၀င်ရီတရောလဲ ဖြစ်သည်။
ချစ်သူနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ရသော အချိန်သည် ကဗျာမဆန်ပါ။ စိတ်ကူးယဉ်မဆန်ပါ။ အိပ်မက်မဟုတ်ခဲ့ပါ။
ကျွန်တော့်နေ့ရက်များအတွက် အလင်းအိမ်လေးကိုသာ ခပ်ပါးပါး သူထွန်းညှိပေးခဲ့ဖူးသည်။
ကျွန်တော် .... သူ့ခြေရင်းအောက် ဒူးထောက်ပျပ်ဝပ်... အဲ့ဒီ တစ်ခနမှာ ကျွန်တော့်မြို့ရိုး တပ်ပျက်သွားခဲ့ဖူးသည်။
ကျွန်တော့်တွင် နောင်တတို့ မရှိခဲ့ပါ။
စာဆိုအဆက်ဆက်ရဲ့ အဲ့ဒီ ဂန္တ၀င်မြောက်စကားတစ်ခွန်း ကျွန်တော့်နှလုံးအိမ်တွင် ခပ်လွန့်လွန့်ချိတ်ဆွဲ ... ကျွန်တော့်တံခါးတို့ သံချေးတက်ခဲ့ဖူးသည်။
ချစ်သူအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စီးချင်းထိုး ... အဲ့ဒီချစ်ခြင်းကို ကျွန်တော် စိန်ခေါ်ခဲ့ဖူးသည်။
သမိုင်း၏ ရာဇ၀င်တိုင်းတွင် အချစ်အတွက် ဧရင့်ကျူး ဖွဲ့သီခဲ့ကြသည်များကို ကျွန်တော်တွေ့ရသိရတိုင်း ကျွန်တော် နှစ်ခြိုက်စွာ ပြုံးခဲ့မိဖူးပါသည်။
ကျွန်တော့်အတွက် ချစ်သူကို ပူဇော်ဖို့ မြတ်နိုးခြင်းမှတစ်ပါး အခြား မရှိခဲ့ဖူးပါ။
ချစ်သူ၏ အပြုံးနုတွင် ကျနော် ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးသည်။
ချစ်သူ၏ မျက်လုံး ကြည်ကြည်လေးတွင် ကျွန်တော်ရူးသွပ်ခဲ့ဖူးသည်။
ချစ်သူ၏ ရယ်ဟဟ စကားလုံးအချို့တွင် ကျွန်တော် ကျဆုံးခဲ့ဖူးသည်။
ကျွန်တော် အကြိမ်များစွာ ရှုံးနိမ့်... ဆောက်တည်ရာမဲ့ ကိုယ့်အရိပ်ကိုယ် ပြန်မုန်းခဲ့ဖူးပါသည်။
ချစ်သူသည် ဆူးတို့ခသော ပန်းရိုင်းပင်လို ကျွန်တော့်ရင်ကို ထွင်းဖောက် .... သူမသိခဲ့သော ကျွန်တော့်ချစ်ခြင်းမှာ ကျွန်တော် အဆိပ်သင့်ခဲ့ရတာ အကြိမ်ကြိမ်.............
မြတ်နိုးခြင်းကို အဖော်ပြု တိတ်တဆိတ် ခိုးကြည့်ခဲ့ရသော အဲ့ဒီနေ့တွေရဲ့ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ ဖြစ်တည်မှုများ၌ ကျွန်တော်ဆိုတာ မြူမှုန်မျှသာ.....
ကျွန်တော်မပြောဖြစ်ခဲ့ဖူးသော စကားလုံးတစ်ချို့ ကျွန်တော့်နှလုံးသားတွင် သိမ်းဆည်းသော့ခတ် သူမမြင်အောင် ဖုံးဝှက်ခဲ့ရတာလဲ ဒိုင်ယာရီတွေ ပြည့်လုမတတ်.........
မိုးရာသီကို ကြိုက်တာချင်းအတူတူ .. ချစ်သူရဲ့ မိုးကိုမှ ကျွန်တော်က ရင်ခုန်ချင်သူ.......
ချစ်သူ ရှူရှိုက်ခဲ့သော ခရေရနံ့သည် ကျွန်တော်၏ အိပ်မက်လဲ ဖြစ်သည်။
ချစ်သူ ဖြတ်လျှောက်ခဲ့သော ဒီလမ်းလေး၏ မြက်ခင်းပြင်တွင် ကျွန်တော့်စိတ်ကူးတို့ မှေးစက်......
ချစ်သူ၏ ဖိနပ်ပါးလေး ကျွန်တော် ဖြစ်ချင်ခဲ့ဖူးသည်။
နင့်အတွက် နင်မသိတဲ့ ခံစားချက်တစ်ချို့ ငါ သိမ်းဆည်းသိုဝှက် ... ငါ့စကားလုံးတွေ ရေစိုကုန်ကြပြီ..........
နင်မသိခဲ့တဲ့ ငါ့ချစ်ခြင်းမှာ ငါ့ကိုယ်ငါ မြှုပ်နှံ .... တိမ်တွေငိုတဲ့ခန ...... ငါ့ရင်တွင်းမှာ မိုးတွေတောင် သည်းလို့........
ပြန်လာပါလို့ ငါမပြောချင်... လှည့်ကြည့်ပါလို့ ငါမဆိုရက်...
နင်မသိတဲ့ ငါ့နှလုံးသားက ချစ်ခြင်းအတွက် သွေးအစက်စက်ကျလို့.....
ဟော့ဒီကောင်းကင်ကြီးအောက်.. ဟော့ဒီမြေပြင်ကြီးပေါ် ချစ်သူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုနဲ့ အသက်ရှင်...
ကျွန်တော့်နေ့ရက်တို့ ဆန်းသစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်တော့်ကဗျာတို့ အသက်ဝင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အိပ်မက်တွေ မိုးလင်းခဲ့ဖူးသည်။
ကျွန်တော့်အတွက် ... ကျွန်တော့်ကမ္ဘာ ... ကျွန်တော့်ကဏ္ဍမှာ ချစ်သူရဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့လေးကို မှန်းဆ.. ကျွန်တော့်အချိန်တစ်ချို့ ပြုတ်ကျသွားခဲ့ဖူးသည်။
ချစ်သူသည် ကဝေပျိုနှင့်တူ၍ မှော်ဆန်သော ပညာရပ်တစ်ခုလဲ ဖြစ်နေခဲ့သည်။
ကျွန်တော်မသိလိုက်ပါဘဲ ကျွန်တော့်နှလုံးသားသည် သူပြုစားခဲ့သော ပန်းသီးတစ်လုံး ဖြစ်ခဲ့သည်။
ချစ်သူကို ........................ ကျွန်တော်ချစ်တယ်...............
ဆူညံစွာ .... ပေါက်ကွဲစွာ... နာကျင်စွာ.... ရင်ဖွင့်ချ... အဲ့ဒီတဒင်္ဂမှာ ကျွန်တော့်စာမျက်နှာလေး ရေလျှံသွားခဲ့ဖူးသည်။
ချစ်တယ်........... ချစ်တယ်............ ချစ်တယ်..............
အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အက္ခရာတင် ... ကျွန်တော့်စာအုပ်လေး ပြည့်ကျပ်သွားဖူးသည်။
စကားလုံးမရှိတဲ့ ခံစားချက်တစ်ချို့ကို မြိုသိပ်ဖို့ .. ငါဘယ်လောက်ထိ သူရဲကောင်းဆန်လိုက်ရတယ်ဆိုတာ ငါသာ အသိဆုံးပါ ချစ်သူ..............
ချစ်သူကို သတိရရင်း အိပ်ပျက်ခဲ့ညတွေ မိုးလင်းခဲ့ရတာ အကြိမ်ကြိမ်.......
ဂစ်တာကို ကြိုးညှိရင်း ကျွန်တော့်သီချင်းတွေက ချစ်သူသာ ဖြစ်သွားခဲ့ကြသည်။
ဘောပင်နှင့်စာရွက်ကို ကိုင်တိုင်း ကျွန်တော့်ကဗျာတွေက ချစ်သူ၏ ကိုယ်ပွားတွေ ဖြစ်သွားကြသည်။
ကျွန်တော့် ၀ိဥာဉ်ကိုက ချစ်သူထံပါး ခစားနေခဲ့သည်ပဲ.......
သူမသိတဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်ခြင်းမှာ ကျွန်တော်ရူးသွပ် အဲ့ဒီခန အိပ်မက်က လန့်နိုးတော့ ချစ်သူဆီမှာ ကျွန်တော်မဟုတ်သော ရင်ခွင်တစ်ခု ရှိနေခဲ့သည်တဲ့။
ကျွန်တော့်စိတ်ကူးတို့ အရောင်မှိန်... ကျွန်တော့်နံနက်ခင်းတို့ ပျက်ဆီးသွားခဲ့ဖူးသည်။
ချစ်ရတာ သိပ်ကို ပင်ပန်းရပါတယ်ချစ်သူ။
အဲ့လိုပဲ ရင်ထဲမှာ သိပ် ............... နာကျင်တယ်။
ငါမဟုတ်တဲ့ ရင်ခွင်တစ်ခုရဲ့ လောင်းရိပ်အောင် နင်ပျော်ဝင် .... အဲ့ဒီ တံစက်မြိတ်မှာ ငါဆိုတာ ရေခိုးငွေ့တစ်ခုပေါ့..........
ငါမဟုတ်တဲ့ နင့်ချစ်ခြင်းမှာ နင့်ရင်ခုန်သံကို နားထောင်ဖို့ နင့်အိပ်ကပ်လေး ငါ ဖြစ်ချင်မိတဲ့ခန.... နင်ရင်းနှီးတဲ့ အဲ့ဒီ ရင်ခွင့်ကို ငါမုန်းတယ်...........
ကျွန်တော်မဟုတ်သော ချစ်သူ မြတ်နိုးသည့် ရင်ခွင်တစ်ခုအတွက် ကျွန်တော့်ဆန္ဒကို အသာပြန်မြိုချ.. ကျွန်တော့်တွင် စကားလုံးတို့ ဆွံ့အသွားခဲ့သည်။
ချစ်သူ၏ အပြုံးအောက် ကျွန်တော့်နှလုံးသားကို ဖြန့်ခင်း .... ချစ်သူနင်းသော ဒီလမ်းလေးတွင် ကျွန်တော်ဆိုတာ မြက်ရိုင်းပင်လေးတစ်ခုမျှသာ....
ကျွန်တော်ရဲ့ ချစ်ခြင်းကို သော့ခတ် .... မကရသေးတဲ့ ဒီပြဇာတ်မှာ ကျွန်တော်က စစ်မထွက်ခင် မြှားကုန်ခဲ့ရသူ..........
ချစ်သူအတွက် ချစ်ခြင်းကို မြတ်နိုးစွာသိမ်းထုပ် ... ကျနော့်နှလုံးသားကို သိမ်းနှုတ်လိုက်တဲ့ အဲ့ဒီခန ....
ကျွန်တော်ဆိုတာ ဒဿထက် ရဲရင့်ခဲ့သူပေါ့......
ချစ်သူမသိတဲ့ ဒီဥယျာဉ်ထဲ ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးခဲ့မိသော ချစ်ခြင်းတွင် ရိတ်သိမ်းခြင်းတို့ မရှိခဲ့တော့ပါ။
စိန်ခေါ်ခြင်းမရှိသော ဒီတိုက်ပွဲ၌ အရှုံးကိုဖက်တွယ်
အဲ့ဒီတောင်ကုန်းမှာ ကျွန်တော်ဆိုတာ မှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ် .. သမိုင်း မော်ကွန်းတင်ခဲ့သည်။
ချစ်ခြင်းမှာ လုပ်ယူလို့ မရဘဲ သူ့ဟာသူ အလိုလို ပေါက်ဖွားလာတဲ့အရာတွေ ရှိတယ်ဗျ...
ကျွန်တော်က ပန်းတစ်ပွင့်မဟုတ်ဘူး... သစ်တစ်ပင်ပါ...
ဥယျာဉ်မှူး စိတ်ရှိတဲ့သူတိုင်း ပန်းကိုပျိုးတဲ့လက်ပဲ ဖြစ်ချင်ကြတယ်...
သစ်ပင်ဆိုတာ ပန်းပျိုးလက် မရှိလဲ .. သူ့ဟာသူ ရှင်သန်နိုင်တယ်... သူ့မှာ ခိုင်မာတဲ့ ရေသောက်မြစ်တွေ ရှိတယ်လေ...
သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာကို အပြင်လူတွေ မမြင်နိုင်လောက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ရှိနေတာပဲ...
ပန်းပွင့်လေးလို့ နူးနူးညံ့ညံ့ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ မွှေးရနံ့ပေးနိုင်တဲ့သူ မဟုတ်ဘူးဗျ....
ပန်းပွင့်လို သွားနေရင် ရယ်စရာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့............
နင့်ကိုသိပ်ချစ်မိတဲ့ ဒီချစ်ခြင်းတွေကို ငါ အသာပြန်မြိုသိပ်ရင်း....... နင့်ကို တိတ်တဆိတ်ပဲ ငါလွမ်းတတ်ခဲ့တော့တယ်ချစ်သူ......
တကယ်တော့ ငါက .. မဖူးခင်ကတည်းက ကြွေခဲ့ရတဲ့ကောင်ပါ ချစ်သူ....
Posted by ဇော် at 8:40 PM7comments:
ငါ အဲ့ဒီ ကလစ်လေးတစ်ဖက် ဖြစ်ချင်ခဲ့မိတယ်....
နင်ပြုံးလိုက်တိုင်း ငါ ရင်ခုန်တယ်
နင်ရယ်လိုက်တိုင်း ငါ လှိုက်မောတယ်
နင် မျက်လွှာဝင့်တိုင်း ငါ မူးမေ့တယ်
ရှက်ခြင်း ကြောက်ခြင်း သိက္ခာရှိခြင်းဆိုတာ
ဒီမြေ ဒီရေ ဒီလေမှာ
( သြဂတ်လ ၃ရက်နေ့ နံနက်ခင်းပိုင်းမှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ( ကျနော့်သူငယ်ချင်းလင်မယားရဲ့) သမီးလေးအတွက်ပါ ....... )
Posted by ဇော် at 10:53 AM2comments:
အပြာရောင် ကင်းမဲ့ခဲ့လေသော ကောင်းကင်
ငါ .... ကြွေတယ်.......
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုတိယ ရှင်သန်ခြင်းပါ
(ငါ) ........... သေတယ်.........................
Posted by ဇော် at 9:14 AM 10 comments:
သီချင်းသည်တစ်ယောက်ရဲ့ ( ကဗျာမဟုတ်သော) ကဗျာ
ညွှန်းဆိုမှု ဖွဲ့ဆိုမှု တစ်ခုတိုင်းစီအတွက်
ပျော့ပျောင်းစွာ ပြေးလွှားနေခဲ့သော သူ့လက်လေးတွေ...
အေးဆေးစွာ ဖန်တီးနေခဲ့သော သူ့ဂီတ..
အရာရာကို အစီစဉ်တကျများ ဖွဲ့သီခဲ့လေသလား...
မေးခွန်းပေါင်းများစွာ မေးဖို့ မလိုအပ်လောက်အောင်ကို သူ့သွင်ပြင်....
သူ့ဟန်ပန်.... သူ့စိတ်အစဉ်ကို ပုံစံသွင်းရင်း...
ဂစ်တာတစ်လက် သံစဉ်တစ်ခက်နဲ့... သူ့ရင်ကိုထုံမွှန်း...
အဘယ်နတ်ဘုရားရဲ့ ညှို့ချက်နဲ့များ ဖမ်းစားထားခဲ့လေသလဲ......
လေတိုးသံတို့တစ်ခနမှာ မိုးမခကိုင်းတို့ ဦးညွှတ်လို့...
လေနှင်ရာကို ယိမ်းနွဲ့မြောပါတတ်ခဲ့တဲ့ မြက်ရိုင်းပင်လေးတွေလို
သူ့လက်ခတ်သံတစ်ချက်မှာ ကျွန်တော့်အိပ်မက်တွေ တိတ်တဆိတ်
စီးမြောမှု လိုက်မောမှုတိုင်းမှာ ဖွဲ့ဆိုမှုတစ်ခုစီ ရှိတယ်ဆိုပါစို့
ကျွန်တော့်ရဲ့ တည်နေရာဟာ သီချင်းသံတစ်ခု
သူဖန်ဆင်းတဲ့ သံစဉ်တွေကြား (ကျွန်တော်)
ညှို့ချက်ပြင်းမှာ ( ကျွန်တော်)
မိုးမခရွက်တို့ ကြွေချိန်လို သိမ်မွေ့တယ်
(သူ့) သီချင်းသံကို နားထောင်းတိုင်း
ဆောင်းရာသီရဲ့ နောက်ဆုံးကျတဲ့ နှင်းပွင့်တွေလို
နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်မရတော့မှာ ( ကျွန်တော်)
အဲ့ဒီနေ့က ( ကျွန်တော်)
( ကျနော့်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ မတော်တဆ ခလုတ်တိုက်ပြီး ကောက်ရခဲ့တဲ့ အကိုတစ်ယောက်အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်.... ကျနော့်ကဗျာလေးနဲ့ သူဆိုတဲ့သီချင်းတွေ လိုက်ဖက်ညီမှု ရှိမရှိကို စာဖတ်သူများ ကိုယ်တိုင် ခံစားကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
Posted by ဇော် at 2:35 AM6comments:
Posted by ဇော် at 5:49 PM3comments:
ရုတ်တရက် ဆူညံစွာမြည်လာတဲ့ နာရီနိုးစက်အသံတစ်ခုကြောင့် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေရာမှ သူမ ရုတ်တရက်လန့်နိုးလာခဲ့သည်.. အပြင်တွင်တော့ သြကာသလောကကြီးက အမှောင်ထုဖြင့် အလှဆင်လျှက်...
မှောင်မိုက်နေတဲ့ အိပ်ခန်းငယ်လေးထဲ တစ်ယောက်တည်းဟူသောအသိက ရင်တစ်ခုလုံးကို အေးစက်ထုံကျင်သွားစေသည်အထိ.. ဒီလိုပါပဲလေလို့ သူမတွေးမိတော့ နှုတ်ခမ်းထောင့်စွန်း၌ ခပ်ပါးပါးအပြုံးတစ်ခု လွင့်ကနဲ..
မြည်နေဆဲဖြစ်သော နာရီနိုးစက်လေးကို ပိတ်လိုက်တော့ အမှောင်ထဲ၌ ကြည့်လို့ရသော နာရီလေးက သူ့လက်တံတွေကို တာဝန်ကျေစွာ ၁၂နာရီ တိတိသို့ ညွှန်ပြလျှက်...
သြော်... နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ ဂျူလိုင်လ ၂၂ရက်နေ့ကို ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီလို့ သူမ တိုးတိတ်စွာ ရေရွတ်လိုက်မိသည်။ အိပ်ယာမှ အသာအယာထလို့ မှောင်မိုက်နေတဲ့အခန်းလေးနှင့်ကပ်လျှက် ၀ရန်တာဆီ သူမထွက်လာခဲ့မိသည်။ လိုက်ကာကိုအသာမလို့ ၀ရန်တာရဲ့မှန်တံခါးနောက်မှာ ကိုယ်ကို ခပ်ရို့ရို့ကွယ်ရင်း အပြင်ဘက်လောကတစ်ခုဆီ ချောင်းကြည့်မိတော့ .. မှောင်မိုက်တိတ်ဆိတ်လွန်းစွာ သူမကို စောင့်ကြိုနေသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ တစ်လောကလုံး ငြိမ်သက်စွာ ... အေးမြစွာ ... ကြည်လင်စွာ........
ဒီနေ့မှာပဲ မေမေသမီးကို မွေးဖွားပေးခဲ့ပါတယ်.. ဒီနေ့မှာပါပဲ... မေမေ နာကျင်စွာနဲ့ ခွဲခန်းထဲကို ၀င်ခဲ့ရတာ.. ဒီနေ့မှာပဲ မေမေ့အသက်ကို နောက်သက်ရှိတစ်ချောင်းအတွက် ပေးအပ်ထားခဲ့ရတာ.. ဒီနေ့မှာပဲ မေမေ လူသားသေးသေးလေးကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့တာ..
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာလို့ ခေါ်ဆိုလို့ရတဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ကို သမီးဖြတ်ကျော်လာပြီးတဲ့အခုအချိန်မှာ မေမေ့ကိုချစ်တဲ့ မေမေ့သမီးအတွက် မေမေ ဘာတွေများမျှော်လင့်ထားခဲ့လဲဆိုတဲ့ အတွေးတစ်ချို့ သမီးရင်ကို လာရိုက်ခတ်နေပါတယ်.. မေမေ သမီးအတွက် ဘာတွေ မျှော်လင့်ထားခဲ့ပါသလဲ.. သမီးဆီက ဘာတွေများ ပြန်လိုချင်ခဲ့ဖူးပါသလဲ..
လူတစ်ချို့ပြောတတ်ကြတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကို သမီး သွားအမှတ်ရလိုက်မိပါတယ်.. မိဘဆိုတာ သားသမီးဆီက ဘာကိုမှ မမျှော်လင့်တတ်ကြပါဘူးတဲ့.. မိဘဆိုတာ သားသမီးကို အမြဲပဲ ပေးဆပ်ထားတာပါတဲ့.. တကယ်က.. သူတို့ ( အဲ့ဒီ လူတစ်ချို့ ) တကယ်မသိတဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာတွေကို သူတို့ တကယ်သိအောင် မကြိုးစားတတ်ခဲ့ကြပါဘူးမေမေ.. အစောပိုင်းကာလတွေအထိ .. မေမေ့သမီးလဲ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..
တကယ်တော့ မေမေရယ်.. မိဘတွေကလေ .. သားသမီးရဲ့ သိတတ်ခြင်းကို .. သားသမီးရဲ့ ခြေဆုပ်လက်နယ်ပြုစုမှုကို .. သားသမီးရဲ့ ဂရုစိုက်ကြင်နာမှုကို.. သားသမီးရဲ့ ရိုသေသိတတ်မှုကို.. သားသမီးရဲ့ မျိုးဆက်တွေကို အမြဲပဲ အစဉ်သဖြင့် မျှော်လင့်နေတတ်ကြပါတယ်တဲ့..
သမီးရဲ့ အစောပိုင်း အသက်တာကာလတွေမှာ သမီးဘယ်လောက်ထိ မေမေ့အပေါ်မှာ ရက်စက်ခဲ့တယ်.. ဆိုးခဲ့မိုက်ခဲ့တယ်.. သမီးကြောင့် မေမေ ကျောင်းရုံးခန်းကို အကြိမ်ကြိမ်ရောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ အခုအချိန်မှာ သမီးပြန်မတွေးရဲလောက်အောင်ကို နောင်တရနေမိတယ်..
တစ်ခါတရံမှာလေ.. အချိန်တစ်ချို့ကို နောက်ပြန်သွားချင်မိပါသေးတယ်မေမေ..
ဒီလိုနဲ့ သမီးရဲ့ ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးအပြောင်းအလဲကို မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေက ဖန်တီးပေးခဲ့ကြတယ်.. ဟုတ်ပါတယ်မေမေ.. သမီးက အဲ့လိုပဲ ယူဆလိုက်မိပါတယ်.. မမျှော်လင့်ခဲ့မိတဲ့ နေ့တစ်နေ့မှာပေါ့.. သမီးဆယ်တန်းစတက်ခါစအချိန်... ကျောင်းမှာမူးလဲလို့ဆိုပြီး မေမေ့ကို လာပြောကြတော့ မေမေ ဘယ်လောက်ထိ ပြာယာခတ်စိုးရိမ်သွားမလဲဆိုတာ သမီး မှန်းဆမိပါတယ် မေမေ.. အဲ့ဒီနေ့ဟာ သမီးရဲ့ ဘ၀နောက်ဆုံးချိန်လဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..
လူတစ်ယောက် သေဆုံးဖို့ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါ ဘယ်လောက်များ လိုအပ်ခဲ့ပါသလဲလို့ သမီးတစ်ခါတရံမှာ တိတ်တိတ်လေး တွေးတတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်..
အကယ်၍များမေမေရယ်.. သမီးအဲ့ဒီအချိန်မှာ သေဆုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်လေ........
သမီး ဆေးရုံကိုစရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီး လေးဆယ့်ငါးရက်လုံးလုံး သတိမေ့မြောနေခဲ့တဲ့နောက် မေမေ့ရဲ့ မျက်ရည်တွေ ဘယ်လောက်များ သမီးရင်ဘတ်နဲ့ လက်တွေမှာ ပေကျံစွန်းထင်းခဲ့ကြပါလိမ့် မေမေ.. မေမေ့ရင်ထဲမှာ ဘယ်လောက်များ ယူကြုံးမရခြင်းတွေနဲ့ ဖြစ်တည်နေမှာပါလိမ့်...
သမီးကို သူတို့ ( ဆရာဝန်ကြီး) တွေက တစ်ဖက်က သွေးတွေ သွင်းပြီး တစ်ဖက်က သွေးတွေလာထုတ်နေကြတယ်.. သမီးကို နှာခေါင်းပိုက်တွေ ထည့်နေကြတယ်.. သမီးကို လျှပ်စစ်နဲ့ နှလုံးကို လာရိုက်နေကြတယ်.. သမီး အရမ်းမောနေခဲ့တယ်.. သမီးအရမ်းနာကျင်နေပါတယ်.. အရာအားလုံးကို သမီးသိနေခဲ့ပါတယ်မေမေ.. ဒါပေမယ့် သူတို့က သမီးကို မေ့မြောနေဆဲဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရှိနေစေခဲ့တယ်.. တကယ်က မေမေရယ်.. သမီးသိနေပါတယ်.. အရာအားလုံးကို သမီးသိနေခဲ့တာပါ.. မေမေ့ရဲ့ ငိုကြွေးသံ.. မေမေ့ရဲ့ သမီးလေးရယ် ဆိုတဲ့တိုးတိုးလေး ခေါ်သံ.. မေမေ့ရဲ့လက်တွေ သမီးနှဖူးပေါ်က ဆံပင်တွေကို လာထိတာ.. မေမေ့ရဲ့ လက်တွေက အစာအိမ်သွေးကြောတွေပေါက်ပြီး သွေးတွေနဲ့ပြည့်လျှံနေခဲ့လို့ ရေတောင်မှ တစ်ပေါက်စွတ်ပေးခွင့်မရခဲ့လို့ ခြောက်သွေ့ကွဲအက်နေခဲ့တဲ့ သမီးရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို လာထိနေခဲ့တာ.. အရာအားလုံးကို သမီး သိနေခဲ့ပါတယ်မေမေ.. သမီးရဲ့ နားထဲမှာ.. မေမေ့ရဲ့ ဘုရားစာရွတ်နေတဲ့ အသံတိုးတိုးလေးကို အမြဲကြားနေခဲ့တာပါ.. မေမေ့ရဲ့ သစ္စာဆိုနေတဲ့အသံလေးဟာ သမီးအတွက် ဘာနဲ့မှ လဲလို့မရတဲ့ အသာယာဆုံးသောအသံလေးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မေမေ.. သမီးဘ၀ရဲ့ နေ၀င်ချိန်ကို ဖြတ်ကျော်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာ မေမေဟာ သမီးရဲ့ အကောင်းဆုံးသောအဖော်အဖြစ် ရှိနေပေးခဲ့ပါတယ်..
သမီးဘ၀မှာ ဘယ်အရာကိုမှ မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ ရယူပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး.. သမီးရဲ့ ဘ၀ရှင်သန်မှုမှာ ဘယ်အရာကိုမှလဲ ဆုပ်ကိုင်ဖက်တွယ်ထားတယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး... မေမေ့ကိုချစ်တဲ့မေမေ့သမီးမှာ ဘ၀တစ်ခုလုံးအတွက် ရင်နဲ့ရင်းပြီးဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုပဲ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်မေမေ... သမီး မေမေ့အပေါ်မှာ သိပ်ကိုတာဝန်ကျေတဲ့သမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်မိတယ်..
မေမေ့ကိုချစ်တဲ့ မေမေ့သမီးဟာ သိပ်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြင့် မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး. မေမေ့သမီးဟာ သိပ်ကို ပြီးပြည့်စုံနေတဲ့ သူတစ်ယောက်လဲ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး.. မေမေ့သမီးဟာ သိပ်ပြီး တော်လွန်းတတ်လွန်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်လဲ မဟုတ်ပါဘူးမေမေ.. ဒါပေမယ့် မေမေရယ်.. မေမေ့ကိုချစ်တဲ့မေမေ့သမီးကြောင့် မေမေ့မျက်နှာလေး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစိတ်နဲ့ လန်းဆန်းနေတာကိုပဲ သမီးမြင်ချင်ခဲ့တယ်.. မေမေ့သမီးမှာ ပိုင်ဆိုင်ရာဆိုတာမရှိပါဘူးမေမေ... မေမေ့ကိုချစ်တဲ့အချစ်နဲ့ မေမေ့ကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုသာ သမီးရင်မှာ ဖြစ်တည်ပါတယ်...
လူသားတိုင်းမှာ ရည်မှန်းချက်ကိုယ်စီ ပန်းတိုင်ကိုယ်စီရှိတတ်ကြပါတယ်.. မေမေ့သမီးမှာလဲ ရည်မှန်းချက်တွေ ပန်းတိုင်တွေနဲ့ပေါ့.. သမီးလျှောက်နေတဲ့လမ်းတိုင်းရဲ့ အဆုံးမှာ အမေဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်တစ်ခုပဲ ရှိနေခဲ့ဖူးပါတယ်.. သမီးရဲ့ ဦးတည်ရာဟာ အမေဆိုတဲ့ တည်ရှိရာပဲ ဖြစ်နေခဲ့ဖူးပါတယ်.. လူငယ်တစ်ယောက်အတွက် နှလုံးသားရေးရာကဏ္ဍတွေလဲ ရှိနေတတ်ခဲ့ပေမယ့် မေမေရယ်.. မေမေ့သမီးအတွက် ဘုရားပြီးရင် ပထမဦးစားပေးဟာ မိခင်ဆိုတဲ့ သမီးကိုချစ်တဲ့ မေမေပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ သမီးနှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ သက်သေပြချင်ပါသေးတယ်..
သမီးရဲ့ နေ့ရက်တိုင်းနဲ့ သမီးရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းဟာ မေမေ့အတွက်ဆိုတာပဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်.. သမီး သိပ်ကိုပင်ပန်းရပါတယ်မေမေ.. သမီးသိပ်ကို စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်.. သမီးမှာ နာကျင်နေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေလဲ ရှိခဲ့တယ်.. သမီးတစ်ယောက်တည်း အားငယ်လွန်းလို့ စိတ်ဓါတ်ကျလွန်းလို့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကို မခံနိုင်လွန်းလို့ တိတ်တိတ်လေး ငိုကြွေးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေလဲ ဒုနဲ့ဒေးပါ... ဒါပေမယ့် မေမေရယ်.. သမီးဘာ့ကြောင့် ဒီလမ်းကို ရွေးချယ်ခဲ့တာတဲ့လဲ.. သမီးဘာ့ကြောင့် တစ်ယောက်တည်း မေမေနဲ့ဝေးရာမှာ နေနေရတာတဲ့လဲ..
သမီးဘယ်လောက်ပဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် နာကျင်ရပါစေ.. သမီးကိုချစ်တဲ့မေမေ့အတွက်ဆိုတဲ့ စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ သမီးအရာအားလုံးကို ပြုံးနိုင်နေခဲ့ပါပြီ.. ဥပေက္ခာပြုနေနိုင်ခဲ့ပါပြီမေမေ.. ဒီလိုနဲ့ မေမေ့သမီးဟာ အလုပ်ထဲမှာတောင် မေမေ့အတွက် နေရာတစ်နေရာကို ရထားခဲ့ပါပြီ...
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်က မေမေချစ်တဲ့မေမေ့သမီးဟာ ပီဘိကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်ပါ.. ဘာမှမသိတဲ့ အမေကိုသာဂျီကျ အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့.. ပြောစကားကိုနားမထောင်တတ်တဲ့.. ဂျစ်ကန်ကန်မိန်းမဆိုးလေးတစ်ယောက်အဖြစ် အသက်တာကို ၁၆နှစ်တိတိ ဖြတ်ကျော်ခဲ့ဖူးပါတယ်..
ခုချိန်မှာတော့မေမေရယ်.. မေမေ့သမီးရဲ့ ရင်ထဲမှာ ငြိမ်းအေးမှုတို့ခိုတွဲလို့ အရာအားလုံးကို သဘာဝကို သဘာဝအတိုင်းပဲ မြင်အောင်ကြည့်တတ်နိုင်ဖို့ လုပ်ယူစရာမလိုတဲ့ နေထိုင်ခြင်းမျိုးနဲ့ ကြိုးစားပြီး လျှောက်လှမ်းနေခဲ့ပါပြီ.. မေမေ့သမီးက သေခြင်းတရားနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် မိတ်ဆက်ခဲ့ဖူးပါတယ်မေမေ..
မတူညီတဲ့လူသားတွေအတွက် မတူညီခြင်းကသာ စိုးမိုးနေတတ်ကြပါတယ်.. သမီးမှာ နေ့စဉ်ဘုရားဝတ်တတ်တဲ့ တကူးတကပြုမူခြင်းမျိုးတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး... မေမေ့သမီးမှာ ဘုရားစာတွေရွတ်နေတာမျိုးလဲ မရှိခဲ့ပါဘူးမေမေ.. ဒါပေမယ့် မေမေရယ်.. သဘောထားတွေ မတူညီကြတဲ့လူတိုင်းကို သမီး တလေးတစားနဲ့ဆက်ဆံပါတယ်.. သမီးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ် လူတိုင်းရဲ့ သဘောထားကွဲလွဲမှုတိုင်းကို သမီးအပြစ်မမြင်တတ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်.. စိတ်ရှည်ခြင်းနဲ့ သည်းခံခြင်းကို အတင်းကျိတ်မှိတ်လုပ်နေမယ့်အစား သမီးရင်ထဲမှာ သတိတစ်ခုကိုပဲ အမြဲဖြစ်တည်ထားပါတယ်..
မေမေရယ်.. သမီးရဲ့တစ်နေ့တာမှာ .. မေမေ့ကိုတာဝန်ကျေချင်တဲ့စိတ်.. သမီးရဲ့လူသားတစ်ယောက်ပီသချင်တဲ့စိတ်နဲ့.. အရာအားလုံးအပေါ်မှာ နောင်တရတာမျိုးမဖြစ်ဘဲ ကုန်ဆုံးသွားချင်ပါတယ်.. အကယ်၍ နံနက်ဖြန်မှာသာ သမီးသေဆုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သမီးနဲ့အတူ သမီးရဲ့ တာဝန်ကျေခဲ့တယ်.. လူသားပီသခဲ့တယ်.. ဆိုတဲ့ စိတ်တစ်ခုကိုသာ သမီးရဲ့ အဖော်အဖြစ် ယူဆောင်သွားချင်ပါတယ်.. သမီးမှာ ပိုင်ဆိုင်ရာဘာမှ မရှိခဲ့ဘူးမဟုတ်လား..
လူတိုင်းမှာ စိတ်ကောင်းကိုယ်စီရှိကြပါတယ်တဲ့.. သမီးရဲ့ နေ့ရက်တိုင်းမှာ သမီးကိုချစ်တဲ့မေမေ့အတွက် ဘယ်လိုအရာမျိုးကိုမှ သမီးမပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်.. သမီးရဲ့ သူတစ်ပါးကို လေးစားမှုပေးတဲ့စိတ်နဲ့ လူသားပီသဖို့ ကြိုးစားခြင်းဟာ မေမေ့တစ်ယောက်တည်းအတွက်ပါဆိုတာတစ်ခုတော့ သမီး လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မေမေ..
သမီးကို သေဆုံးခြင်းမှ ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ မေမေ့သစ္စာတရားတွေအတွက် သမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. သမီးကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့ လွတ်မြောက်ရာကို ရှာဖွေဖို့အတွက် အခွင့်အရေးရခဲ့တဲ့ အချိန်တိုင်းကိုလဲ သမီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. သမီးရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်တစ်ခု အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ သေခြင်းတရားနဲ့နီးကပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကိုလဲ သမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
အရာအားလုံးမှာ ကျေးဇူးတင်ခြင်း.. ချစ်မြတ်နိုးခြင်း... သဘာဝတရားကိုနားလည်ခြင်းများနဲ့ သမီးရဲ့ အသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့ နေ့တွေကို နေထိုင်ဖြတ်ကျော်ချင်ပါတယ်မေမေ..
မေမေလဲ သဘောတူလိမ့်မယ်လို့ သမီးယုံကြည်ပါတယ်.. မေမေက သမီးကို သိပ်ချစ်တဲ့မေမေမဟုတ်လား..
အပြင်မှာ လမင်းကြီး ထိန်ထိန်သာနေပါတယ်...
သမီးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ အဲ့ဒီနေ့ရက်တုန်းက အပြင်မှာမိုးတွေ သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းနေခဲ့တယ်တဲ့..
အခု ဒီနေ့မှာတော့ တိမ်ကင်းစင်နေတဲ့ ကောင်းကင်ပြင်ကြီးနဲ့ လမင်းကြီးက သမီးရဲ့ အသက်ရှင်မှုအတွက် ကောင်းချီးပေးနေကြတယ်မေမေ.. သမီးရဲ့ အသက်ရှင်မှုအတွက် မေမေဂုဏ်ယူသလို သူတို့လဲ ဂုဏ်ယူနေကြတယ်လို့ သမီး ယုံကြည်ပါရစေ..
သမီး ဒီနေ့မှာပဲ ရှင်သန်ပြီး နံနက်ဖြန်မှာ သေဆုံးသည်ဖြစ်စေ..
သမီးရဲ့ အသက်တာနဲ့ ရှင်သန်မှုကို မေမေပေးခဲ့လို့ .. မေမေ့ကို သမီး သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မေမေ..
မေမေ့ကို သမီးချစ်မြတ်နိုးစွာ .. ချစ်ခြင်းနဲ့အတူ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်..
သမီးရဲ့ (၂၃)နှစ်မြောက် ဒီမွေးနေ့မှာ မေမေ ပျော်ရွှင်စေဖို့...
Posted by ဇော် at 1:45 AM 13 comments:
နှလုံးသားတစ်ခု၏ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ အလွမ်း
၀ိဥာဉ်တို့ရဲ့ နာခံရာလဲ ဖြစ်ရဲ့
ငှက်တို့ရဲ့ နှုတ်ဆက်သံလဲ ဖြစ်ရဲ့
၀တ်ရုံတော်ရဲ့ လှုတ်ခတ်သံလဲ ဖြစ်ရဲ့
ပိုးစားနေတာတောင် ငါ မသိခဲ့မိဘူး
ရင်နာတယ်လို့ ငါ ဆိုနေတယ်
ပင်ပန်းမှုလို့ ငါ ယူခဲ့တယ်
ဥယျာဉ်မှူးက ပြုံးနေလေရဲ့ ..
မြေကြီးကို တွယ်တာခွင့်တောင် မရှိခဲ့တော့ဘူး။
ငါ့တံခါးက ( အမှတ်မရှိ )အခုထိ စေ့ထားဆဲ...
Posted by ဇော် at 8:04 PM5comments:
အဲ့ဒီနေ့က ခါတိုင်းလို မိုးမရွာခဲ့ဘူး ..
အဲ့ဒီနေ့က ခါတိုင်းလို ပန်းပင်ကလေး မပွင့်ခဲ့ဘူး..
အဲ့ဒီနေ့က ခါတိုင်းလို သူမလာခဲ့ဘူး ..
အဲ့ဒီနေ့က ခါတိုင်းလို တွေ့နေကြနေရာလေးမှာ မရှိခဲ့ဘူး..
အဲ့ဒီနေ့က ခါတိုင်းလို အိမ်ပြန်တော့ မနက်ဖြန်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး..
အဲ့ဒီနေ့က ခါတိုင်းလိုမဟုတ်ဘဲ သူ့ကို တစ်သက်စာ လွမ်းတတ်ခဲ့တယ်...။
Posted by ဇော် at 4:38 AM3comments:
'ကကြီး'ကနေ'အ' အဆုံး အကုန်လုံး တစ်ဝုန်းဝုန်းပြိုကျခဲ့
ကလေးရဲ့ ချိုချိုရွှင်ရွှင်အပြုံးလေးတစ်ချို့ပဲ ရှိခဲ့တယ်။
ငိုချင်နေတာတောင် မျက်ရည်က ကျကျနန ကျခွင့်မရဘူး။
(မင်း.. ဖြူစင်စွာ ပွင့်လန်းလှည့်ပါ။)
မင်း.. ဖြူစင်စွာ ပွင့်လန်းလှည့်ပါ။
(10.06.10) 06 55 AM
Posted by ဇော် at 9:55 AM7comments:
လက်ဖျားတွေ ထုံကျဉ်သွားကြတယ် ။
သွေးကြောတွေ အေးစက်သွားကြတယ် ။
တဂိုးကို သိချင်မှသိမယ် ၊
ဗန်ဂိုးကို သိချင်မှသိမယ် ၊
Posted by ဇော် at 5:51 AM7comments:
အသံမဲ့ ခေါင်းလောင်းသံ ..
ကလေးရယ် .. ပင်ပန်းလိုက်တာကွယ်တဲ့ ..
မချိတရိ အပြုံးတစ်ချို့နဲ့ ငါ့နေ၀င်ချိန်တွေကို
နိဂုံးချုပ်လိုက်ရတာ ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ဘူး ..
မိုးစက်ပွင့်တွေ မျက်နှာပေါ် ခပ်ပြင်းပြင်း ရိုက်ခတ်တုန်းက
ငါ့နားကို တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောသွားကြတယ် ..
ကလေးရယ် .. မမောဘူးလားကွယ်တဲ့ ..
ငါ့နံနက်ဖြန်တွေအတွက် မျှော်လင့်ချက်မဲ့ နိုးထရှင်သန်နေတာ
ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ဘူး ..
မြူခိုးတွေ ငါ့တစ်ကိုယ်လုံးကို လွှမ်းခြုံတုန်းက
ငါ့နေ့ရက်တွေ မှိုင်းဝေသွားခဲ့ဖူးတယ် ..
အဓိပါယ်မဲ့ နံနက်ခင်းတိုင်းအတွက် နေ့လည်ဆိုတာ
ညနေဆိုတာက မှောင်မိုက်ခြင်းနဲ့ မိတ်ဖွဲ့လို့ ..
ငါ တိုးတိုးလေး ငိုညည်းမိတုန်း ..
ငါ့ကို ကောင်းကင်နဲ့ကြယ်က ဟားတိုက်ရီကြတယ် ..
လေပြည်ကတော့ ရူးလဲရူးတဲ့ကောင်တဲ့ ..
အရူးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို ဘယ်သူကမှ
ငါ တစ်ယောက်သာ ..
Posted by ဇော် at 9:21 AM6comments:
ပြတင်းတံခါးကြားမှ ညင်သာတိုးလျစွာ စ်ိမ့်ဝင်စီးမျောလာသော ညဉ့်လေအေးအေးထဲတွင်
ပိတောက်ပန်းရဲ့ အငွေ့အသက်တွေပါနေသလားဟု ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်မိသည်။
တစ်ကယ်တော့ ကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်မှ ဂရစ်ကွက်လေးတစ်ကွက်သာ ခြားနေသည့်အရပ်၌
အမိမြေ၏ပုံရိပ်သည် အိပ်မက်မှလန့်နိုးတိုင်း ပြန်လည်တမ်းတမိသော အရိပ်လေးတစ်ခုအဖြစ် စိတ္တဇညများကို အရောင်ချယ်ထားတော့သည်။
ပျိူမြစ်နုနယ်၍ လန်းဆန်းတတ်ကြွသော ရေစိုအလှနှင့်အတူ ဧပရယ်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့လေပြီ..။
သံပတ်ပေးမထားသော်လည်း ရာသီစက်ဝိုင်းသည် မည်သူ့ကိုမှမစောင့်ပဲ ပြက္ခဒိန်များကို စုတ်ဖြဲပစ်ခဲ့သည်။
ပျော်တစ်ဝက်နိုးတစ်ဝက် အိမ်မက်များဖြင့် နွေနှောင်းရာသီရဲ့ နေ့ရက်များဆီမှာ အလင်းပန်းတို့ကို ပွင့်စေခဲ့ပြီ..။
သူနှင့်ကျွန်တော်စတွေ့ခဲ့ပါသည်။ သူသည် စံပယ်ပန်းကိုပန်ထားသော ကံကော်ပင်ပျိုနှင့်တူသည်။
သူသည် … ကျွန်တော့်ရဲ့ ကဗျာအပိုင်းအစလေးတစ်ခုဖြစ်သည်… ။
ကျွန်တော် ဆိုပြခဲ့ဖူးသော သီချင်းသံတိုးတိုးလေးဖြစ်သည်… ။
အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေထဲက ရိုးရာဆန်ဆန်အလှတရားလေး ဖြစ်သည်…။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ရေခဲလွင်ပြင်လိုညတွေဆီမှာ တောက်လက်နေခဲ့သော မီးအိမ်လေးတစ်လုံးဖြစ်သည်…။
သူငယ်ချင်းဟူသည့် ဝေါဟာရကို အဓိပါယ်ဖွင့်ပြသော စကားလုံးများက
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ မသိလိုက်မသိဘာသာ နေ့ရက်များက သံယောဇဉ်တစ်စုံတစ်ရာကို စိုက်ပျိူးနေခဲ့မှန်း မည်သူကမျှ သတိမပေးခဲ့ကြပါ။
ကျွန်တော်တိုက်ခတ်သော လေပြည်တို့ဖြင့် သူ့ဥယျာဉ်လေးကို စွတ်စိုအေးမြစေခဲ့သလို.. သူ ၀င်းပသော အလင်းမြမြတို့ဖြင့်လည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းကို နွေးထွေးလင်းလက်စေခဲ့ပါသည်…။
ကျွန်တော့်ရဲ့သူငယ်ချင်းလေးသည် သိုးငယ်လေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ ဖြူစင်ငြိမ်းချမ်းပြီး သူ့နှလုံးသားသည် ကဗျာများကိုချစ်တတ်သော ပန်းနုရောင်စာအုပ်လေး တစ်အုပ်လည်းဖြစ်သည်….။
သူသည်… တစ်ခါတစ်ရံတွင် စပျစ်နွယ်တို့၏ အစိမ်းရောင်ဆန်ခြင်းမျိုးဖြင့် ရဲရင့်တတ်သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင်တော့ နှင်းဆီဆန်ဆန် လေးနက်နေတတ်သေးသည်….။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် စမ်းချောင်းလေးလို ငြိမ်သက်သိမ်မွေ့စွာ စီးဆင်းနေတတ်သလို တစ်ခါတစ်ရံတွင်တော့
သူနှင့်ကျွန်တော်၏ စာမျက်နှာအချို့ကို ကာရံအပိုင်းအစလေးများဖြင့် ကုန်ဆုံးစေတတ်ခဲ့ပြီး ဂီတသံတစ်ခုခု၏ အောက်တွင်လည်း စီးမျောပျော်ဝင်ခဲ့ကြဖူးသည်…။
ချုပ်နှောင်ထားခြင်းမရှိသော ဖွဲ့သီမှုမျိုးဖြင့် ခရမ်းပြာရောင် ပန်းပွင့်အိမ်မက်တို့ကို ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့နေ့ရက်များတွင် တစ်ပွင့်ခြင်းစီသီကုံးခဲ့ဖူးပါသည်…။
ပြိုင်ပွဲမ၀င်ခဲ့တာတောင် အနိုင်လိုချင်တဲ့သူတွေကို သတိထားပါ..။
ညဉ့်ဦး၏ နောက်ခံတေးသွားမပါဘဲ တိုက်ခတ်လာသော လေပြည်သန့်သန့်တွင်
ဧပရယ်လက်ကျန်မိုးငွေ့များနှင့်အတူ အလွမ်းရနံ့တို့ကို ကျွန်တော်ရနေခဲ့သည်…။
အသည်းကွဲကြယ်တစ်ချို့၏ မှိန်ပြပြအလင်းရောင်သည် သူအားသတိရခြင်းများကို ကျွန်တော့်အခန်းကျဉ်းလေးထဲတွင် ထွန်းညှိစေခဲ့သည်..။
အဲ့ဒီလိုနှင့် ရှင်းသန့်သောမေတ္တာတရားသည် ကောင်းကင်၏လက်ဆောင် မိုးစက်အေးများလို
ဂျစ်ပစီမိုးတိမ်သီချင်းလို ဘ၀ဟာလွင့်ချင်ရာလွင့်နေခဲ့တဲ့ နေ့တွေထဲမှာ
ကျွန်တော်နှင့်သူငယ်ချင်းလေးသည် ကျောင်းစာအုပ်နှင့်လွယ်အိတ်ကလေးလို တွယ်တာခဲ့ကြသည်…။
နာရီလက်တံတွေ တစ်ငွေ့ငွေ့တိုက်စားခံရပြီးကတည်းက ညတွေဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းပိုမှောင်လာသလို…။
စစ်ထွက်သူရဲရဲ့ ဓါးခတ်သံတစ်ချက်မှာ အလွမ်းတစ်ဝက်ရောနေသလို
မိုးရိပ်တွေပြိုလာရင် နားခိုရာအိပ်တန်းဆီကို လွမ်းဆွတ်တတ်တဲ့ငှက်ငယ်လို
ကမ္ဘာဦးအက္ခရာတွေနဲ့ သီကုံးထားတဲ့ အလွမ်းဖြူဖြူလေးတွေကြောင့်
အလင်းစက်ကောင်းကင်ကြီး ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အနာဂါတ်ဟာ
ကာရံတွေမပါလည်း ဆက်လက်ရဲရင့်နေကြဦးမယ်ဆိုတာ ဒီဧပရယ်ရဲ့နံနက်ဖြန်တိုင်းမှာ
သူငယ်ချင်းလေးတစ်ယောက် သိ နိုင် ပါ စေ………... ။
(သူ့အိမ်လေးတစ်နှစ်ပြည့်မှာ “ပိုး” အတွက်အမှတ်တရ…)
( ကျွန်တော့်ကို မယ်မင်းကလေးလို့ ကျွန်တော်က ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ရတဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း မင်းက ပြောတယ် .. ကလေးမလေးရေ .. ဧပြီ သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာ ပြည့်တဲ့ အိမ်ကလေး ၁နှစ်ပြည့်က အခု မေလကိုတောင် ခုန်ကူးလာပြီနော်တဲ့ ..
ကျွန်တော် ပါးပါးလျလျ ပြုံးလိုက်မိပါတယ် ..
ကျွန်တော်ကလဲ ကျွန်တော်ပါပဲလေ .. (အလုပ်ကို အကြောင်းပြပြီး) အပျင်းထူနေတာနဲ့ စာမရေးဖြစ်တာတောင်ကြာပေါ့ .. ကြာဆို ကျွန်တော်ရေးတာတွေ တင်တာတွေကလဲ မကောင်းတော့ တစ်ခါတစ်ခါ အားငယ်မိပါသေးတယ် .. ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်ကလဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်အားတင်းမိတယ် .. ငါစာရေးချင်လို့ လုပ်ထားတဲ့ ငါ့အိမ်ကလေးပဲ .. အမြဲတမ်း ကျက်သရေရှိနေပါတယ်လေ ဆိုပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပီတိတွေ ဖြစ်လို့ရယ်ပေါ့ .. ( တကယ်က မယ်မင်းကလေးနဲ့ လင်းစက်ရာရဲ့ ကဗျာတွေသာ ကျွန်တော့်အိမ်မှာ အသက်ဝင်နေတာပါ .. ကျွန်တော့်စာတွေ ကဗျာတွေက ကိုးတန်း ဆယ်တန်းကလေးတွေ အပျော်တမ်းရေးကြတဲ့ စာမျိုးတွေလောက်သာ ဖြစ်တည်နေကြတာကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲ ခိုးပြီး မလုံမလဲနဲ့ ရှက်မိနေသေးတယ်.. )
ခုလဲ မယ်မင်းကလေးကို ကျွန်တော်က ပူဆာလို့ မယ်မင်းကလေး ရေးပေးတဲ့ ကျွန်တော့်အိမ်ကလေး တစ်နှစ်ပြည့်လက်ဆောင်လေးဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သိပ်ပြည့်စုံလွန်းပါတယ်..
( မယ်မင်းကလေးရေ .. နင့်ကို ကျေးဇူးတင်လျှက်ပါ .. )
ဒီလိုပဲ .. ကျွန်တော့်အိမ်ကို ကျွန်တော်နဲ့သိသည်ဖြစ်စေ .. မသိသည်ဖြစ်စေ .. ကျွန်တော့်ရဲ့ ဂျစ်ကန်ကန်စာတွေကို ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ .. မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ .. ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒေါင့်မကျိုးမှုတွေကို သဘောကျသည်ဖြစ်စေ .. မကျသည်ဖြစ်စေ .. တကူးတကနဲ့ အထူးတလည် လာပေးကြတဲ့ အကိုအမတွေအားလုံးကို ကျွန်တော် အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်လျှက်ပါ .. ကျွန်တော့်ဆီမှာ ကွန်းမန့်မပေးလို့ ကျွန်တော်က စိတ်ခုတာမျိုး .. အဲ့အိမ်ကို သွားမလည်တာမျိုး မရှိပါဘူး .. ရှိမှာလဲ မဟုတ်ပါဘူး.. ကျွန်တော်က ကွန်းမန့်ကို မမျှော်တတ်ခဲ့တော့တာ ကြာပါပြီ .. တစ်ခါတလေကျ ကွန်းမန့်ပေးရတယ်ဆိုတာ အချိန်တစ်ခုပေးရသလို စဉ်းစားချိန်တစ်ခုပေးလိုက်ရတာလဲ ဟုတ်တာပဲလေ .. အလွယ်တကူ ပေးတဲ့ကွန်းမန့်ရယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ ဘယ်သူ့မှာမှ ရှိမယ်မထင်ပါဘူး.. ကွန်းမန့်တစ်ခုပေးဖို့ စာကို သေချာဖတ်ရမယ်.. နောက် အဲ့အတွက် သေချာပေးဖို့လုပ်ရတော့မယ် .. ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျ.. ကျွန်တော်အိမ်တွေမှာ စာလိုက်ဖတ်ပါတယ် .. အဲ့လိုဖတ်တာက အလုပ်သွားကာနီးတို့ အိပ်ခါနီးတို့မှာ ဖတ်ဖြစ်တာများတယ်.. အဲ့လိုကျတော့ ကွန်းမန့်တကူးတကပေးဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက် ခက်သွားပြန်ရော .. ရေးတာမကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး.. စာရေးတယ်ဆိုကတည်းက သူ့ဟာနဲ့သူကတော့ သိပ်ကို ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်.. ဒါကို စာဖတ်သူတိုင်းလဲ နားလည်ကြမယ်ထင်ပါရဲ့ .. အဲ့လိုမျိုး အခြေအနေမှာ ရှိနေတဲ့ကျွန်တော် .. ကွန်းမန့်သိပ်မပေးဖြစ်တော့တာ အဆန်းတကြယ်တော့ဖြင့် မဟုတ်လှပါဘူး.. ဒီတော့ ကျွန်တော့်လိုလူမျိုးတွေ ရှိနေနိုင်မယ့် လောကကြီးအတွက် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ ကွန်းမန့်မမျှော်တော့ဘူး.. ( စိတ်ပင်ပန်းရပါတယ်ဗျာ.. )
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အိမ်ကလေးကို တကူးတကရော .. တကူးတကမဟုတ်တဲ့ လမ်းမှားပြီးတော့ရော ရောက်လာကြသူအားလုံးကို ကျွန်တော် တကယ်ကို လေးလေးနက်နက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. နောက်လဲ ကျွန်တော် ကြိုးစားပြီး စာရေးချင်ပါသေးတယ်.. ရေးဖို့လဲ ဆန္ဒအမြဲရှိနေဆဲပါ .. ကျွန်တော့်စာတွေ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ .. မကောင်းသည်ဖြစ်စေ .. ကျွန်တော့်အတွက် ဝေဖန်ချက် ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ .. အချိန်တွေ လည်ပတ်နေသ၍ ကျွန်တော့်အတွက် အခြေအနေနဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခု ရနေသ၍ ကျွန်တော် ကြိုးစားကြည့်ချင်ပါသေးတယ် ..
မယ်မင်းကလေးရေ .. နင်မရှိတော့လဲ ငါ့အိမ်ကလေးကို ငါအသက်ဝင်နေစေပါ့မယ် .. ငါ့အတွက် ပြောတာပါလို့ နင်ပြောခဲ့တဲ့ နင့်စကားတစ်ခွန်းကို ငါ အမြဲသတိရနေပါ့မယ် .. နင်ဟာ ငါ့အတွက် အမြဲတမ်းသူငယ်ချင်းပါဟာ .. နင့်ကို ငါ တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ငါတို့အဖြူရောင်တွေ ဆက်လက်ခိုင်မြဲပါစေ ... )
Posted by ဇော် at 2:27 PM7comments:
Posted by ဇော် at 6:42 PM3comments:
ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်တော့မယ့် ရွှေဝါရောင်ပန်းလေးတွေကို လွမ်းတယ်..
လမ်းထိပ်က အုန်းလက်မဏ္ဍပ်လေးကို လွမ်းတယ်..
ပါးထက်က ရေစိုနေတဲ့ပါးကွက်ကြားကြားလေးကို လွမ်းတယ်..
ခေါင်းစဉ်ကြီးကြီးနဲ့ စာအုပ်ထူထူတွေကြားမှာ ညှပ်ထားတာတောင်
Posted by ဇော် at 2:24 AM5comments:
Posted by ဇော် at 5:41 PM3comments:
ဇန်န၀ါရီတွေဟောင်းလို့ ဧပြီကိုတောင် ခုန်ကူးခဲ့ပြီ
နှင်းငွေ့တွေပျောက်လို့ ရော်ရွက်ဝါတွေတောင် ကြွေခဲ့ပြီ
တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပြောင်းခဲ့ပြန်ပြီ
ပုပ်သိုးဟောင်းနွမ်းမသွားတဲ့ အရာတွေထဲ အချိန်ဆိုတဲ့ ဒြပ်တစ်ခုကတော့
အပေါ့ဆုံးလို့ လူတိုင်းယူဆနေတဲ့ အလေးဆုံးအရာဆိုတာ
ဟော .. ဆောင်းခိုငှက်တွေ အိမ်ပြန်ချိန်
မျှော်သာမျှော် ပေါ်မလာတဲ့ ဧည့်သည်အတွက်
သည်းသည်းမဲမဲရွာတတ်တဲ့မိုးတွေတောင် (တစ်ချိန်ချိန်မှာ) စဲခွင့်ရကြသေးတယ်..
သက်တန့်ပေါ်ချိန်မှာ ရှိနေခွင့်တော့ ရချင်သေးတာပေါ့
မိုးတွေရွာတိုင်း နင့်ကိုလွမ်းတယ် ..
လွမ်းတိုင်း ငါ့မျက်ဝန်းမှာ မိုးတွေရွာတတ်ခဲ့တယ် ..
ခံစားချက်ကိုသာ ဥယျာဉ်ထဲမှာ စိုက်ပျိုးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်
ရိုးရာမပျက်တဲ့ အဆင်အလာတွေက ရိုးရာကို စောင့်ထိန်းနေပြန်ရဲ့
ရာဇ၀င်မှာ ခူးဆွတ်ခံဖို့ ပန်းတစ်ပွင့် (သခင့်အတွက်) ပွင့်နေခဲ့တာကြာပြီ
ဟော .. ပြောရင်းဆိုရင် ပထမဆုံး နှင်းပွင့်တွေကို ဖြန့်ကျဲဖို့ တိမ်တွေတောင် အရှိန်ယူနေကြပြန်ပြီ
ဥသြငှက်တွေ အလည်လွန်လို့ ဆောင်းခိုငှက်တွေ အိပ်တန်းက ထွက်ခဲ့ကြပြန်ပြီ
ရာသီတွေ ပြောင်းလို့ သစ်ကိုင်းတွေတောင် ခိုတွဲကျကုန်ပြီ
ငါ့မျက်ဝန်းမှာတော့ ဥတုတစ်ခုထဲ ရပ်တည်နေဆဲပဲ
သုံညဆိုတဲ့ဂဏန်းတစ်လုံးမှာ ဘာများ အထင်ကြီးစရာ ရှိနေသေးလို့လဲလေ
Posted by ဇော် at 6:28 PM 8 comments:
နှင်းမှုန်တို့ဖြင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ဖူးသော မိုးရာသီ
ဆောင်းဆိုတာ ကျွန်တော့်ရင်မှာ အကြိမ်ကြိမ်မိုးသောက်ခဲ့ပေါ့
စကားလုံးတစ်ချို့မှာ နှင်းကိုဘယ်လောက်မြတ်နိုးကြောင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အသက်သွင်းတတ်တဲ့
ကျွန်တော့်အသက်ဓါတ်တွေ တစ်ခဏစာ ချုပ်ငြိမ်းသွားခဲ့ဖူးတယ်နှင်း..
နှင်းအတွက်အအေးဓါတ်တွေကို ဟိုးအဝေး တောင်တန်းကြီးတွေဆီကနေ
ဒီလို လ မသာတဲ့ညတွေမျိုးမှာတောင်
နံရံထက်က အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးသံသဲ့သဲ့ကို နားထောင်ရင်း
ထီးထီးမားမားကြီးရပ်နေတဲ့ နာရီစင်ထက်က ကောင်ကင်ကိုကြည့်ရင်း
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ဘာသာစကားကို နားမလည်တဲ့ ကျွန်တော့်နှလုံးသားက
နှင်းရဲ့လက်ဖ၀ါးတစ်ဖက်ကို တွေ့နေ့ခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ
တစ်ကယ်တော့ နှင်းဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက်
ကျွန်တော့်ရင်ဟာ နှင်းမရှိတဲ့ဆောင်းမှာ ပြာရီအက်ကွဲနေတယ်လေ..
ကျွန်တော့်ဆိုတဲ့ လ ကလေးကလည်း
လေနှင်တိုင်း လွင့်ချင်ရာလွင့်နေတဲ့ ဟော့ဒီကောင်က
နှင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာ မိုးနဲ့ဆောင်းလို ကျောချင်းကပ်နေခဲ့လည်း
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ နွေဆန်ဆန် ကြမ္မာရိုင်းတွေကြောင့်
နှင်းကိုသတိရတိုင်း ငွေ့ရည်ဖွဲ့နေတဲ့ အလွမ်းညိုတွေက
ဆောင်းအငွေ့အသက်တို့နဲ့ စွတ်စိုစေခဲ့ပါပြီနှင်းရယ်..။ ။
Posted by ဇော် at 3:12 AM6comments:
ခြေလှမ်းမရွေ့  ချင်တော့...
ညှို့  သိမ်းဖြစ်တည်နေတာ....။
ရင် အနာဆုံးပဲ.....။ ။
Posted by ဇော် at 9:38 AM 8 comments:
၂၀၀၃ခုနှစ်ရဲ့ ညနေပိုင်းတစ်ခု ..
အဲ့ဒီအချိန်က ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာဖို့ အရူးအမူးဖြစ်နေတဲ့ အချိန်ပေါ့။ ကျွန်တော် မြို့ထဲက အင်္ဂလိပ်လူမျိုး အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ဖွင့်ထားတဲ့ လူမသိ သူမသိ ကျူရှင်လိုသဘောမျိုး ဘာသာစကားဝိုင်းကို တက်ဖို့ သွားခဲ့တဲ့အချိန် ..
အဲ့ဒီ ညနေခင်းလေးတစ်ခုမှာပါပဲ ..
နူးညံ့မှုတွေ ပါးပါးလေး ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့
ငါ ခနတာ သေဆုံးသွားတယ်။
အကျီအဖြူလေးဝတ်ထားပြီး မျက်မှန်တစ်လက်ကို တပ်ထားခဲ့တဲ့ သူ ..
လက်ခလယ်မှာ ကြောင်မျက်ရွဲလက်စွပ်တစ်ကွင်းကိုပဲ အမြတ်တနိုးဝတ်ထားတဲ့ လက်သည်းကို ညီညီညာညာလေး ညှပ်ထားတဲ့ အဲ့ဒီ လက်ချောင်း ဖြူဖြူသွယ်သွယ်လေးတွေကို ကျွန်တော် အမှတ်တမဲ့ ငေးကြည့်ခဲ့မိဖူးပါတယ်။ တစ်လောကလုံး ငြိမ်သက် .. အသံတွေ စွန့်အ .. ရာသီတွေ တိတ်ဆိတ်လို့ပေါ့။
အိပ်မက်ဦးမှာ ပန်းတစ်ပွင့် ပွင့်ခဲ့ဖူးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ဖူးတယ်။ ကျွန်တော့်ထက် ၉နှစ် ၅လနဲ့ ၁၄ရက်တိတိ ကြီးတဲ့သူ့ကို ကျွန်တော်က မမလို့ ဘယ်တုန်းကမှ မခေါ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုဆို လူကြီးတစ်ယောက်လို တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်စွာနဲ့ ဆက်ဆံတတ်ခဲ့တဲ့ သူ့ကို ကျွန်တော်ဘယ်တုန်းကမှ အမတစ်ယောက်လို မဆက်ဆံတတ်ခဲ့တာ ကျွန်တော့်နှလုံးသားရဲ့ အပြစ်တစ်ခုပဲ ဆိုကြပါစို့ ..
အစိမ်းရင့်ရင့် ဖြာတယ်...။ ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ နေ့ရက်တွေတိုင်းမှာ သူအမြဲဖြစ်နေခဲ့ဖူးပါတယ်။
အတူထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အင်းဝစာအုပ်တိုက်ဘေးက ကော်ဖီဆိုင်လေး၊ ၃၆လမ်းထဲက ကြေးအိုးဘုရင်၊ လှည်းတန်းက မစ်စတာဘရောင်း၊ နောက် ... အစုံပါပဲဗျာ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကျူရှင်ကို ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်တိုင်း ရောက်လာတတ်ခဲ့တဲ့သူ၊ ကျွန်တော်ကြေးအိုးကြိုက်တတ်တာကို သဘောတကျနဲ့ ထိုင်ကြည့်နေတတ်ခဲ့တဲ့သူ့ကို ကျွန်တော့် နှလုံးသားက တိတ်တိတ်လေး မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးတယ်။
ကျွန်တော်ရသမျှ မုန့်ဖိုးတိုင်းဟာ သူ့ဆီဖုန်းဆက်ဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်နေတတ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်သူ့ဆီ ဖုန်းဆက်တိုင်းလဲ သူအားသည်ဖြစ်စေ၊ မအားသည်ဖြစ်စေ ကလေးတစ်ယောက်ကို နှစ်သိပ်သလိုမျိုး သူအမြဲပဲ နားထောင်ပေးနေတတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်က မြင်နေရတဲ့လမင်းကို လိုချင်တမ်းတနေခဲ့ဖူးတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်လိုပဲ မဟုတ်လား။
လိုတာမရလို့ အော်ငိုလိုက်ရင် အဆင်ပြေတတ်တဲ့
မနက်ခင်းကို ရောက်မှာ ဘယ်သူမှမပြောလဲ
တိတ်..တိတ်..လေး ....... မသိချင်ယောင်ဆောင်နေယုံ.......။
အဲ့ဒီနေ့က မိုးတွေ ရွာနေခဲ့တယ်။
သူနဲ့ကျွန်တော်က အမြဲတမ်းသူနေတဲ့ အနော်ရထာအိမ်ယာရဲ့ အရှေ့က မစ်စတာဘရောင်းကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ ညနေတိုင်း အမြဲထိုင်တတ်ခဲ့လေတော့ ကျွန်တော်တို့ မိုးကို အတူခံစားခဲ့ဖူးတယ်။
ကျွန်တော်က မိုးတွေ အရမ်းသည်းနေတဲ့အချိန်မှာ မွေးခဲ့တဲ့သူမို့ မိုးရွာတာကို သိပ်ကြိုက်တာပဲလို့ ပြောမိတော့.. သူက .. လှတဲ့မျက်စိနဲ့သာကြည့်မယ်ဆိုရင် ရွှံ့ဗွက်တောင် လှတယ် လင်း .. ရဲ့ .. တဲ့ ..
ကျွန်တော် နက်ရှိုင်းခဲ့ဖူးတယ် ..
ကျွန်တော့်ရဲ့ အတိတ်မှာ နှလုံးသားတစ်ခုပဲ ရှင်သန်ခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်သက်မှာ တစ်ခါသာ ပျော်ဝင်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါဟာ သူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့။ ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီ .. ဒီနေ့အထိ မေ့မရနိုင်ခဲ့တာကတော့ ...
သူရဲ့ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည် ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ ပုံစံ၊ အေးချမ်းလွန်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ သပ်ရပ်လွန်းတဲ့ဟန်ပန်တွေဟာ သိပ်မထူးခြားတဲ့အသွင်အပြင်ကို ဆောင်ထားခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ရင်အုံမှာတော့ ခုပြန်စဉ်းစားရင်တောင် အခုထိ နွေးလျနေဆဲပဲဆိုတာ..
ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဦးချစ်ဆိုင်မှာ ထိုင်ကြတုန်းက မြသန်းတင့်ရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အငြင်းအခုန်ဖြစ်ခဲ့ကြဖူးတယ်။ ကျွန်တော်က လူ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ လူက လုပ်ယူတာလို့ ပြောတော့ သူက မဟုတ်ဘူး လင်းရဲ့တဲ့ .. လူ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ စိတ်ကလုပ်ယူတာတဲ့ ..
တစ်တောလုံး ဥပေက္ခာတွေဝေလို့ ..
ကျွန်တော် သူ့ကို သိပ်ချစ်နေမှန်း သူသိမှာပါ။ သိတယ်လို့လဲ ကျွန်တော်အခိုင်အမာ ယုံကြည်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မသိချင်ယောင် ဟန်ဆောင် မျက်ဝန်းလဲ့လဲ့တွေနဲ့ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ သူ့နှလုံးသားကို ကျွန်တော် မြင်အောင် မကြည့်တတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူက သိပ်ကို ပိရိသေသပ်လွန်းသူပါ။ ကျွန်တော်ကသာ အရူးအမူးကို ဖြစ်လို့။
ငါ မင်းနဲ့လွဲတုန်း ၊
ကျွန်တော့်ရဲ့ နေ့ရက်တွေ ဒိုင်ယာရီစာမျက်နှာတွေရဲ့ အဖွင့်တိုင်းမှာ သူ့အတွက် ကဗျာတွေ စာတွေပဲ ရှိနေတတ်ခဲ့တယ်။ သူ့ကို ပေးဖို့အထိတော့ ကျွန်တော့်မှာ သတ္တိမရှိခဲ့ရိုးအမှန်ပါ။ သူက ကျွန်တော့်ရဲ့ မြတ်နိုးရာလေ ..
ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းပြီးသွားခဲ့တာတောင် သူ့ကို ကျွန်တော်အရူးအမူးနဲ့ တမ်းတနေခဲ့တုန်းပါပဲ။ နေ့တိုင်းဖုန်းဆက်ခဲ့တာတွေ .. အပတ်တိုင်း သူ့အိမ်ရှေ့သွားခဲ့တာတွေ .. သူမသိနိုင်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ အိမ်အောက်ကို အခေါက်ခေါက်အခါခါ ဖြတ်လျှောက်ခဲ့တာတွေ .. သူ့လက်မှတ်လေးထိုးထားတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို အမြတ်တနိုး ပွေ့ဖိုက်ထားခဲ့ဖူးတာတွေ .. လက်ကမချတတ်နိုင်လောက်အောင်ကို ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ သူပေးခဲ့တဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင် အဘိဓါန်စာအုပ်တွေ .. ကျွန်တော်သိပ်ကို (စိတ်) ပင်ပန်းခဲ့ရဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရင်အစုံကတော့ (သူ့အတွက်) လတ်ဆတ်နေဆဲပါ။
ကျွန်တော် သူလာမယ်ဆိုလို့ စောင့်မျှော်ခဲ့ရဖူးတဲ့ ညနေတွေကို ပြန်လွမ်းမိတယ်။ အခုအချိန်မှာ သူက ကျွန်တော်နဲ့ မိုင်ပေါင်းကုဋေချီပြီး ဝေးနေခဲ့ပါပြီ။ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ နှလုံးသားချင်းလဲ ဝေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့မှာ ချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားမှ ရှိရဲ့လားလို့ ကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်သံသယ ၀င်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူ့ကို ချစ်မြတ်နိုးရလွန်းလို့ အရူးအမူးဖြစ်နေချိန်မှာ သူကတော့ အပြုံးမပျက် သွေးအေးနိုင်လွန်းခဲ့တယ်။
သံခင်းတမန်ခင်း အပြုံးတွေ မခြွေလည်း
ငါ ( ချစ်ခြင်းနဲ့ အတူ ) ရင်ခုန်ပါရဲ့ ...။
ငါ နေသားတကျ ရှိလှတယ်...။ ။
ကျွန်တော် သူနဲ့အတူရှိနေခဲ့တဲ့ နေ့ရက်တွေ ရာသီတွေ နှစ်သစ်တွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကံကောင်းသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူ့ချစ်ခြင်းကို တိတ်တဆိတ် မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးပေမယ့် ကျွန်တော်က ချစ်နေခွင့်မှာပဲ ကျဆုံးချင်သူပါ။ သူပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းကို အမှတ်ရနေခဲ့ဖူးတယ် ..
လင်း .. ကောင်းကောင်းနေ .. အပိုတွေမလုပ်နဲ့တဲ့။
အခုအချိန်ထိ ကျွန်တော့်ဘယ်ဘက်ရင်အုံအောက်မှာ အဲ့စကားလေးကို မြှုပ်နှံထားဆဲပါ.. ကျွန်တော်က ချစ်ခြင်းမှာ ဒူးထောက်အရှုံးပေးထားခဲ့ဖူးပါတယ်။
ည .... ည ...
အိပ်ရမှာတောင် မသထာဘူး ...။
ကောင်းကင်က ကြယ်တွေကို ကြည့်တိုင်း .. အိုး .. ဒီအချိန် သူဘာလုပ်နေမှာပါလိမ့်လို့ အတွေးနဲ့ သူရှိရာအရပ်ဆီ မှန်းမျှော်တမ်းတ ကြည့်ရတာလဲ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ချိုမြိန်ခြင်းတစ်ခုပါပဲ .. အိုဗျာ .. သူနဲ့ပတ်သတ်ရင် အရာရာဟာ ချိုမြိန်ခြင်းအတိနဲ့ ယက်လုပ်.. စိတ်ကူးတွေကို အိမ်ဆောက်ခဲ့ဖူးတယ် ..
နင့်မျက်နှာလေးကို အရင်ဆုံးလွမ်းနေခဲ့တာ ..။
ကျွန်တော့်ရဲ့နေ့သစ်တွေမှာ သူ့ရဲ့ဟယ်လိုဆိုတဲ့ အေးဆေးညင်သာသိမ်မွေ့တဲ့အသံလေးနဲ့ စတင်ချင်ခဲ့တာ ကျွန်တော့်ကို အရူးလို့ပဲ ဆိုဆို .. ကျွန်တော့်နှလုံးသားက သူ့ရင်ခွင်တံစက်မြိတ်အောက် တိတ်တိတ်လေး ရပ်စောင့်နေခဲ့တာ ကြာခဲ့ပြီ။
နင်နဲ့ပတ်သက်ရင် နာကြင်ကြေကွဲလွယ်တဲ့ ငါ့နှလုံးသား
နင်သာမြင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ရိုးရိုးလေးပါဟာ ......။
ကျွန်တော် သူခန သွားနေတယ်ဆိုတဲ့ သူ့မိဘတွေ အိမ်ရှိတဲ့ သုဝဏက အိမ်ကို အတန်းပြီးတိုင်း တကူးတကမဟုတ်တဲ့ ရင်ခုန်ခြင်းနဲ့ အမြဲပဲ သွားခဲ့ဖူးတယ်။ သူဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာ အတိအကျတော့ မသိခဲ့ပါဘူး။ သူ့အိမ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့လမ်းကိုတော့ ချောင်းပေါက်မတတ် အခေါက်ခေါက်အခါခါ ဖြတ်လျှောက်ခဲ့ဖူးတယ်။ နေပူတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အချစ်တစ်ခုစီးဆင်းရာ အိုအေစစ်တစ်ခုလိုကို ဖြစ်လို့ ...
ရင်ခုန်ခြင်းတွေ စိုက်ထားဖူးတယ် ..
ကဗျာတွေလည်း ဖတ်ပြဖူးတယ် ..
တိတ်တိတ်လေး ကြွေပျက်ခဲ့ဖူးတယ် …. ။
သူ့ရဲ့ ယူနီဖောင်းအဖြူလေးရယ် ဦးထုပ်အဖြူလေးရယ် ဆောင်းထားတဲ့ ပတ်စ်ပို့ဓါတ်ပုံသေးသေးလေးကို မမျှော်လင့်ဘဲ ကျွန်တော်ရခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူမသိခဲ့ဘဲ ရခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီဓါတ်ပုံလေးဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာထက်မှာ.. ကျွန်တော့်ရဲ့ အိပ်ခန်းနံရံထက်မှာ.. ကျွန်တော့်ရဲ့ စာမျက်နှာတွေထက်မှာ.. ကော်ပီပေါင်းများစွာကူးရင်း ကျွန်တော့်ရဲ့နေရာအနှံ့မှာ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ချစ်ခြင်းဆိုတာ ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းမှ မဟုတ်ခဲ့ပဲလေ ..
မှတ်မှတ်ရရပေါ့ .. ကျွန်တော်တို့သင်တန်းကာလမှာ သူစာဖတ်နေတဲ့ပုံလေးကို ကျွန်တော်ခဲခြစ်ပန်းချီ ဆွဲခဲ့ဖူးတယ်။ သူ့ရဲ့ ငိုက်ကျနေတဲ့ မျက်တောင်စင်းစင်းလေးတွေ .. နှာတဲ့စင်းစင်းလေးနဲ့ ပိရိသေသပ်တဲ့ နီစွေးစွေးနှုတ်ခမ်းထော်ထော်လေး .. နောက် ပျော့ပျောင်းရှည်သွယ်စွာ ကျလာတဲ့မေးရိုးတစ်လျှောက် .. အိုး .. အရာအားလုံးဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အိပ်မက်ချည်းပါပဲ ချစ်သူ ..
ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော့်အသက်လဲ အဲ့တုန်းကလို ဆယ်ကျော်သက်မဟုတ်ခဲ့တော့ပါဘူး။ ဆယ်ကျော်သက်မို့ ရူးသွပ်ခဲ့တယ်လို့ သူစွပ်စွဲခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ သူ့ကိုချစ်တဲ့ချစ်ခြင်းတွေ အခုထိ အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ စီးဆင်းနေဆဲဆိုတာ သူသိနိုင်မယ်ဆိုရင်လေ ..
ခင်ဗျားသာ နည်းနည်းလောက်မြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေ .. ကျွန်တော့်ရင်ထဲကို ခနလောက်ဝင်ကြည့်ပါလား .. ခင်ဗျားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ဟောဒီရင်တစ်ခုလုံး ပြာကျမတတ်ကို ဖြစ်လို့ ...
နင်သိသိ မသိသိပေါ့ ……………။
သူနဲ့ဝေးနေရပေမယ့် .. သူ့အချစ်ကို မရခဲ့ပေမယ့် ဟော့ဒီကောင်းကင်ရဲ့အောက် ကမ္ဘာမြေပြင်တစ်နေရာမှာ သူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသိက ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အရာအားလုံးကို ကျေနပ်သွားစေနိုင်ခဲ့တယ်။
ဘုရားက ကျွန်တော့်ကို ချစ်သား .. လိုရာဆုတစ်ခုကို တောင်းလော့လို့ အမိန့်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုပါစို့ ..
ကျွန်တော်သေရင်လေ .. ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဖြစ်ပါရစေ ..
ချစ်သူကို နွေးထွေးစွာ ဖက်တွယ်ရင်း အမြဲပဲ ငုံ့မိုးကြည့်ချင်နေခဲ့မိလို့ပါ ..
( ကျွန်တော့်ရဲ့ ရေးခဲ့ဖူးပြီးသား ကဗျာတွေထဲက ကျွန်တော်သိပ်ကြိုက်မိတဲ့ အပိုဒ်လေးတွေကို ပြန်ပြီးထည့်ရေးထားတာပါ .. ကဗျာတစ်ဝက် စာတစ်ဝက်ပုံစံနဲ့ စာရေးနည်းကတော့ ဆရာမ မနော်ဟရီရဲ့ စာရေးနည်းကို အတုယူထားပါတယ်။ ကျွန်တော်နှစ်သက်လို့ပါ။ ကျွန်တော့်ရေးဟန်က သိပ်တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ပေါ်လွင်အောင် ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်။ သည်းခံပြီးဖတ်ပေးကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ =] )
Posted by ဇော် at 4:15 AM9comments:
ငါ့ကိုယ်ငါ ခ၀ါချလိုက်တဲ့ အဲ့ဒီ အရောင်မဲ့ ကဗျာညတွေ ...